Booliska Soomaaliya oo 30 qof u xiray dhaca Mobeelada - Awdinle Online
Booliska Soomaaliya oo 30 qof u xiray dhaca Mobeelada
Taliska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay Kooxo hubeysan oo malmihii la soo dhaafay dhac xilliyada habeenkii degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir dadka Shacabka ah ugu geysanayay dhaca mobeelada.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ay mas’uul ka yhiin amniga dalka, isla markaana ay soo gaartay in maalmihii la soo dhaafay Magaalada Muqdisho uu kajiray dhaca Mobeelada.
Waxaa uu sheegay in shalay howlgal ay sameeyeen Ciidamada booliska Gobolka Banaadir ay dhaca Mobeelada u qabteen 30 Ruux oo laga tuhmayo inay kamid yihiin dadka dhaca geysanay.
Taliye Xijaar ayaa ku amray Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir unay tallaabo deg deg ah ka qaadaan Kooxaha Burcada ah ee xilliyada habeenkii dadka Shacabka ah dhaca u geysanaya.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir waxaa dhac loogu geystay dad Shacab ah, iyada oo falkaas ay ka dambeeyeen Kooxo hubeysan oo qaarkood Mootooyin Bajaaj ah wata.
Previous articleKenya oo amartay in 14 maalmood guduhood lagu xiro xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma!
Next articleCabdirashiid Janan oo lagu soo dhaweeyay degmada Beled-Xaawo